Visual Arts : AfriLine : Africa Business Directory
Arts And Entertainment - Visual Arts
Arts And Entertainment - Visual Arts [ 1-15 of 15]
Gallery of Shona stone sculptures by several artists.
Features the art made by Zimbabwean Harry Mutasa, weld artist and canvas painter.
North America's oldest and largest collection of Zimbabwean Shona stone sculpture.
ZimSculpt - Virtual Gallery
Online sales of work by Zimbabwean sculptors.
Shona sculpture from 250 Zimbabwe carvers with a gallery in Vancouver, Canada.
Wholesale and retail dealer in Zimbabwe Shona stone sculpture, including busts, abstracts and wildlife art.